नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग अहिलेसम्म कति मिटर खनियो,कहिले हुन्छ पूरा ? » aarthikplus
नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग अहिलेसम्म कति मिटर खनियो,कहिले हुन्छ पूरा ?
२०७८ असार २२ गते, मंगलवार १८:५८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिएको छ । मजदुरमा कोरोना देखिएपछि केही समय सुस्ताएको सुरुङमार्ग निर्माणले अहिले फेरि गति लिएको हो ।
आयोजनाका म्यानेजर नरेशमान शाक्यका अनुसार हालसम्म आयोजनाको १६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्ग अन्तर्गत २४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक प्रगति भएको उनले बताए ।
उनले हालसम्म ८०० मिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको बताए । सुरुङको मेन टनेलतर्फ २४६ मिटर टनेल खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । पूर्व (काठमाडौंतर्फ) ९३ मिटर टनेल खनिएको छ । पश्चिम (धादिङतर्फ ) १५३ मिटर टनेल खन्ने काम पूरा भएको छ ।
यसैगरी, स्केप टनेल अन्तर्गत हालसम्म ४५९ मिटर टनेल खन्ने काम पूरा भएको छ । जसमा पूर्वतर्फ ३०२ र पश्चिमतर्फ १५७ मिटर टनेल खन्ने काम भएको छ । यस्तै क्रस प्यासेजमा ९.५५ मिटर काम भएको छ भने अन्य फिलिङ, एप्रोच, सडक निर्माण लगायतको काम १२० मिटरमा सम्पन्न भएको शाक्यले बताए ।
उनले चालू आर्थिक वर्षमा कोभिडको कारण सोचे जस्तो काम हुन नसकेको बताए । ‘यो वर्ष कोरोनाका कारण सोचे जस्तो काम हुन सकेन्, तर, हामीले निषेधाज्ञमा पनि काम रोकेका छैनौ थोरै मजदुर राखेर भए पनि काम गरेका छौं,’ शाक्यले भने ।
कोभिडको दोस्रो लहरका क्रममा निषेधाज्ञ भए पनि नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको थियो । ६५० जना जनशक्तिमध्ये ८६ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएपछि धेरैले काम गर्न छाडेका थिए । निषेधाज्ञामा १०० जनाका हाराहारीको जनशक्तिले काम गरिरहेका थिए । हाल ५०० हाराहारीमा जनशक्ति फर्किसकेको उनले बताए । जनशक्ति फर्केसँगै कामको सिफ्ट बढाउने आयोजनामा रहेको उनले बताए ।
हाल मेन टनेलमा २ सिफ्टमा काम भइरहेको छ । स्केप्ट टनेलमा एक सिफ्टमा मात्र काम भइरहेको छ । अब चाँडै स्केप्ट टनेलमा पनि २ सिफ्टमा काम गरिने उनको भनाइ छ ।
अबको १४ महिनाभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य सहित फेरि सुरुङ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने उनले बताए । जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेशनले ६०० जनशक्ति खटाई २४ घण्टा काम गरिरहेका छ ।
यो सुरुङमार्ग करिब २.७ किलोमिटर हुनेछ । काठमाडौंतिरको पोर्टल चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ को टुटीपाखामा रहनेछ भने धादिङतिरको पोर्टल धुनिबेंसी नगरपालिकाको सिस्नेखोलामा रहने छ । टनेलमा मुख्य दुई वटा लेन हुनेछ । बीचमा थप एउटा सानो साइड लेन छ । सवारी साधन बिग्रिए साइड लगाउन उक्त लेन प्रयोग हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिकमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास भएको २१ महिना बितिसकेको छ  । ४४ महिनामा निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि विभिन्न समस्याहरूका कारण सुरुङ खन्ने काम ढिला शुरू भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
यस सुरुङमार्गको मुख्य निर्माण कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेशनले बनाएको तालिका अनुसार आगामी १४ महिनामा सुरुङ छेडिनेछ । यो सुरुङमार्गको परामर्शदाता कम्पनी जापानको निप्पोन कोइ इजे र नेपाली कम्पनी एनसीसीको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) हो । यो जेभीले नै यस आयोजनाको डिजाइन गरेको हो भने आयोजना पूरा गर्दासम्म यसको सुपरीवेक्षणको काम पनि सोही कम्पनीले गर्नेछ ।